တည်ငြိမ်သောလျှပ်စစ်နှင့်အတူရေ Bende ရန်ကဘယ်လို
နှစ်ခုတ္ထုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်ပွတ်နေကြတယ်သောအခါ, အချို့ အီလက်ထရွန် တဦးတည်းအရာဝတ္ထုကနေအခြားမှခုန်။ အီလက်ထရွန်ဥစ္စာတိုးပွားသောအရာဝတ္ထုကိုပိုပြီးအဆိုးတရားစွဲဆိုဖြစ်လာ; အီလက်ထရွန်ရှုံးသောတဦးတည်းကိုပိုပြီးအပြုသဘောတရားစွဲဆိုဖြစ်လာသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်စွဲချက်သင်အမှန်တကယ်တွေ့မြင်နိုငျသောလမ်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုဆွဲဆောင်။
တာဝန်ခံစုဆောင်းဖို့တလမ်းတည်းနေတဲ့နိုင်လွန်ဖြီးနှင့်သင်၏ဆံပင်ဖြီးသို့မဟုတ်တစ်ပူဖောင်းနှင့်အတူကပွတ်သပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ဆံပင် (အားလုံးအတူတူပင်တာဝန်ခံ) ၏ strands တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွန်းလှန်နေစဉ်ဖြီးသို့မဟုတ်ပူဖောင်း, သင့်ဆံပင်ဖို့ဆွဲဆောင်ကြလိမ့်မည်။
ရေတစ်ကျဉ်းမြောင်းစမ်းချောင်း (ချောချောမွေ့မွေ့စီးသောဖြတ်ပြီး 1-2 မီလီမီတာ) စီးကြောင်းဒါကြောင့်ကိုထိပုတ်ပါဖွင့်မည်။
ရေကိုမှအနီးကပ်ဖြီး (မကအတွက်) ၏ပူဖောင်းသို့မဟုတ်သွားများရွှေ့ပါ။ သင်ရေချဉ်းကပ်သကဲ့သို့, စီးသင့်ရဲ့ဖြီးဆီသို့တင်နိုင်ရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
စမ်းသပ်မှု! '' ကွေး '' ၏ပမာဏကိုဖြီးရေသည်မည်မျှနီးကပ်အပေါ်မူတည်ပါသလား? သင်စီးဆင်းမှုကိုထိန်းညှိဆိုပါကမည်မျှစီးကွေးထိခိုက်စေသနည်း? အခြားပစ္စည်းများကိုကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြီးအညီအမျှကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သလား? ဘယ်လိုဖြီးနေတဲ့ပူဖောင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရသနည်း သင်ပိုမိုလူတိုင်းရဲ့ဆံပင်ကနေတူညီတဲ့သက်ရောက်မှုအရဒါမှမဟုတ်တချို့ဆံပင်ဖြန့်ချိမသလား အခြားသူများထက်တာဝန်ခံ ? သင်ကစိုစွတ်သောရတဲ့မရှိဘဲတွန်းလှန်ဖို့ရေဖို့လုံလောက်တဲ့သင့်ရဲ့ဆံပင်နီးစပ်ရနိုင်သလား?
အဆိုပါစိုထိုင်းဆနိမ့်သည်တဲ့အခါဒီလှုပ်ရှားမှုပိုကောင်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ စိုထိုင်းဆမြင့်မားတဲ့အခါ ရေငွေ့ တ္ထုများအကြားခုန်မည်ဟုသောအီလက်ထရွန်အချို့ဖမျးတယျ။ တူညီသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သင့်ဆံပင်သင်ဖြီးတဲ့အခါမှာလုံးဝခြောက်သွေ့ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကြေးနီကနေကြေးနီ Acetate Make ရန်ကဘယ်လို
သိပ္ပံတရားမျှတသောစီမံကိန်း Lab မှအစီရင်ခံစာ Template ကို
တစ်ဦးနီနှင့်အပြာရောင်မီးသတ်လေဆင်နှာမောင်း Make ရန်ကဘယ်လို
အဆိုပါအရောင်ပြောင်းလဲခြင်း Chameleon ဓာတုဗေဒဆန္ဒပြသလားစေရန်မည်သို့
အဘယ်မှာရှိ Saltpeter သို့မဟုတ်ပိုတက်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ်ကိုဝယ်ရန်
Acetylsalicylic အက်ဆစ် - အက်စပရင် Make လုပ်နည်း
အရောင်မီးပုံ Make ရန်ကဘယ်လို
ဘီးခန္ဓာဗေဒ 301: အော့ဖ်ဆက်နှင့် backspace
မာ့ခ်-Vivien FoE ၏မရဏ
'' ကအျောသဲ ': Cassio နှင့် Roderigo
ငါ CO2 သို့မဟုတ် Compressed Air ကိုသုံးပါသငျ့သလော
ထောက်ခံချက်၏နမူနာပေးစာ - စီးပွားရေးကျောင်းမှလျှောက်ထားသူ
ဆွေးနွေးချက်မေးခွန်းများ '' မြို့နှစ်မြို့ရဲ့ပုံပြင် ''
သငျသညျ Pepperoni ဆိုရမည် ...
အလက်ဇန်းဒါး Hamilton က၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဆိုပါ Salic ဥပဒေ
အခင်းအကျင်းပန်းချီအတွက်အလင်း Direction အဖွဲ့ကိုနားလည်ခြင်း
Adverb Clauses (အပိုင်းနှစ်ခု) နဲ့အဆောက်အဦးသောဝါကျများ
ယင်းစာသင်ခန်းများအတွက်ရေချိုးခန်း Pass ကိုစနစ်